Real Madrid Oo Ku Guuleysatay Spanish Supercopa Ka Dib Markii Ay Garaaceen 10 Ciyaaryahan Oo Barca Ah. - jornalizem
Real Madrid Oo Ku Guuleysatay Spanish Supercopa Ka Dib Markii Ay Garaaceen 10 Ciyaaryahan Oo Barca Ah.
Real Madrid ayaa ku guuleysatay koobka Spanish Super Cup ka dib markii ay lugta labaad ay 2-1 kaga badiyeen kooxda Barcelona iyadoo wadar ahaan ciyaarta labada lug ay ku dhamaatay barbaro 4-4 ah balse lagu kala baxay sharciga goolasha martida ah.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay jawi dardar leh, iyadoo durbadiiba ay Real Madrid oo garoonkeeda lagu ciyaarayay ay bilowday weeraro isdaba joog ah iyagoo fursado qaali qasaariyay qeybihii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaana hogaanka u dhiibay Madrid daqiiqadii 11aad ee ciyaarta, ka dib markii Pepe kubad uu u soo qaaday Higuain uu difaaci wayay Mascherano taasoo u fasaxday Higuain inuu shabaqa ku hubsado kubada.
8 daqiiqo ka dibna waxaa hogaanka u sii dheereeyay xiddigooda Cristiano Ronaldo kaasoo kubad kore oo loo soo dhigay si qatar ah cirib kaga hormarsaday Gerard Pique islamarkaana la kor tagay Valdes oo uu shabaqa ka ruxay.
Cristiano Ronaldo ayaa ku biiray ván Zamorano, iyagoo ah kaliya ciyaartoyda goolal ka dhaliyay shan El Clasico oo isku xigta.
Ku dhawaad ciyaarta oo socota 30 daqiiqo ayaa xaalada Barcelona ay ka sii dartay ka dib markii casaan toos ah uu qaatay Adriano, kaasoo qalad ku galay Ronaldo oo ahaa kaliya ciyaaryahanka ugu danbeeya ee u furnaa goolka.
10kii casaan ee ugu danbeysay ee la bixiyay ee El Clasico oo uu ku jiro casaankii caawa, kaliya labo ka mid ah ayaa Barcelona la siiyay.
Dhamaadii qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa gool u soo celiyay Barcelona Lionel Messi, isagoo dhaliyay laad xor ah oo cajiib ahaa.
Messi ayaa dhaliyay goolkiisii 15aad ee El Clasico, waana ciyaaryahanka ugu sareeya Barcelona ee goolasha ugu badan ka dhaliyay Real Madrid.
Qeybtii hore oo inta badan ay gacansareysay Real Madrid ayaa waxaa lagu kala nastay 2-1 oo hogaanka ku heysay Real Madrid.
Qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa dhanka natiijada aysan waxba iska bedelin, iyadoo fursado qaali ah ay iska qasaariyeen labada dhinac, Pedro ayaa u soo dhawaaday inuu Barca u barbareeyo, halka Real Madrid uu fursado qaali ah ka qasaariyay Higuain oo ay ku jirto kubad ay birta ka beenisay.
Sidoo kale isla qeybtii labaad waxaa bedel ku soo galay ciyaaryahano labada kooxood uga yimid xagaagaan waqooyiga London Alex Song iyo Luka Modric oo kulankoodii ugu horeeyay ee kooxahooda cusub ciyaaray.
Natiijada wadar ahaaneed ee ciyaarta ayaa ka dhigeysa 4-4, lakiin Real Madrid ayaa koobka Spanish Supercup ku qaaday sharciga goolasha martida.
Real Madrid ayaa haatan mar kale hogaanka u qabatay kulamada fool ka foolka ah ee ay kulmeen Barcelona, iyagoo badiyay 88 kulan halka Barca ay badisay 87 kulan.
Markii ugu horeysay ayay Real Madrid kaga badisay Barcelona garoonkeeda tan iyo bishii May 2008.
Waa koobkoodii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan, iyagoo isku dayaya sidoo kale inay difaacdaan koobka La Liga oo ay qaadeen xilli ciyaareedkii hore.